Waa Guri deegaan ah oo kuyaalo xaafada Ceeldheere Degmada Dharkenley. Waxaa ka dhisan Guriga 5 Qol, 2 Musqul, Kushiin iyo Parking Baabuur. Wuxuu leeyahay Documents saxan. Cabirkiisa waa 10x20M2. Qiimaha waa $73,000 iyo heshiis aad ku qanacdo.
Wixii faah faahin ahna, Kala soo xiriir Kirosom Real Estate Solutions:
Address: Xaafada Calaamadaha, Woqooyi Galbeed, Somalia
Updated on January 19, 2018 at 1:57 am
Guri iib ah - Xaafada Calaamadaha, Woqooyi Galbeed, Somalia